Yaadannoon Gootota Oromoo Hirmaannaa Sabboontotaa Dabaluun Kabajame!
Date: April 20, 2010Author: Oromedia 0 Comments
Madda Oduu ABO-MOA/ Perth 20 Ebla / 2010) Saamicha, Hidhaa, fi ajjeechaa ummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru hundeen buqqisuuf kaayyoo bilisummaa Oromoof ummati Oromoo marti kutatee akka qabsaa’u dhaamame.
Kun kan dhaamame ayyaana guyyaa Gootota Oromoo Australia dhihaa magaalaa Perth keessatti dilbata darbe, 18/04/2010, kabajamee oole irratti ta’uu MOAn gabaasee jira.
Sirna ayyaanichaa akka aadaa Oromootti eebba maanguddoon eegalame kana irratti barreessaan koree ABO konyaa Austiraaliyaa dhiha J/Tulluu Kabbadaa guyyaa kana ilaalchisuun haasaa bal’aa fi hamileessaa ummataaf godhee keessatti, wareegama Gootota Oromootiin injifannooleen galmeessamanis olaanaa ta’uu eeree jira.
“Jaallan keenya lubbuu isaanii jijjiirraa hin qabne wareeguun akka nuti har’a Oromoo dha ofiin jennu nutaasisanii jiru,” kan jedhe Jaal Tulluun, “kaayyoon isaan wareegamaniif ammayyuu galii isaa waan hin gayin jiruuf tokkummaa keenya cimsinee wareegama bilisummaan gaafatu baafnee akka galii keenya geenyuuf jabaannee hojjachuu qabna,” jedhee jira.
Jaal Tulluun gochaa hamaa Wayyaaneen ummata Oromoo irratti raawwataa jirtus yoo tarreessu, “yeroo ammaa kana diinni keenya qabsoo keenya ABOn hogganamu yoo danda’e ball’eessuuf ykn gufachiisuuf karaa baayyee dhokataa ta’ee fi hin taaneen dalagaa jira. Ummata keenyas hamilee keessatti ajjeesuuf badii tokko malee maqaa ABO deeggertan jedhuun mana hidhaatti guuree gidirsaa jira; qabeenyi keenyas saamamaa akkasumas ‘ABO bal’eessuuf Oromoo deegsu’ kan jedhu sagantaa isaa fiixaan baafachuuf lafa Oromoo alagaatti gurguruun akka Oromoon deegu taasisaa jiru.,” jedheera.
Haala kana keessatti, “Oromoo kan taane hundi qarqara dhaabbannee hidhii xuuxuu dhiifnee kaayyoo dhaaba keenya ABO jala hiriiruun faajjii gootowwan keenyaa kaafnee kaayyoo isaan wareegamaniif galiin geenyee abbaa biyyaa ta’uu qana,” jechuun waamicha isaa dabarsee jira.
Itti gaafatamaan jaarmiyaa ummataa koree ABO PERTH J/Mahaamud Jamaal jaarmiyaa ummataa ilaalchisee haasaa godhan keessatti mootummaan Wayyaanee yeroo ammaa kana Oromoo fi Oromiyaa dhabamsiisuuf halkanii fi guyyaa dalagaa akka jirtu ibsee, “dhibdee kanatti fala gochuuf ummati keenya ilaalcha siyaasaa, kutaa fi amantiin utuu wal hin qoodiin Oromummaan ijaaramnee badiisa jalaa of dandamachiisuu qaba,” jedhee jira.
Jaal Mahaamud itt dabaluunis, ilmaan keenya biyya ambaatti dhalatanii fi guddatan, afaan, seenaa, aadaa fi safuu Oromoon guddisuun dirqama Oromummaa ta’uu hubachiisee, “kun kan dhugoomu yoo ijaaramne qofa waan ta’eef, hundi jaarmiyaaf dursa kennuu qaba,” jedhee jira.
Yeroo kana keessatti ijaaramanii dhimma saba Oromoo irratti hojjachuu hanqachuun immoo garbummaa lammataa ta’uu kan hubachiiise gaafatamaan jaarmiyaa ABO konyaa Australia Dhiyaa kun, “yoo kana gochuu hanqanne garuu ilmaan keenya gabrummaa dhaalchisuuf akka dirqamnu hundi beekuu qaba,” jechuun haasaa saa xumuree jira.
Itti aansuun kan haasaa xumuraa godhan J/Gammachuu Dambalii dura taa’aa konyaa ABO dhiha Austiraaliyaa dhiyaa yoo ta’an isaanis, haasaa isaanii keessatti “bu’aan wareegama jaallan keenyaan argame xiqqaa ta’uu baatullee, Oromiyaan ammallee gabrummaa jala jiraachuun ishee bilisummaa keenya dhugoomsuuf amma illee wareegamni olaanaa kan nurra eegamu ta’uu nutty mul’isa,” jedhaniiru.
“wareegama jaallawan keenyaan bu’aan argame kan nama boonsuu fi gammachiisu ta’us, jaallan keenya of-biraa dhabuu keenya gama tokkoo gaddisiisaadha,” kan jedhan Jaal Gammachuun “Oromoofi Oromiyaa badiinsa irraa kan oolche waan ta’eef ittiin boonna,” jedhaniiru.
“Oromiyaan ammayyuu gabrummaa jala jirti. Roorroon alagaan ummata keenya irraan gahaa jirus daran itti hammaachaa jira.,” kan jedhan dura taa’aan Konyaa Australia Dhiyaa, “qorichi roorroofi dhibdee kanaa qabsoo qofa waan ta’eef, bakka jirrutti wal ijaarree WBO waanta barbaachiseen bira dhaabbannee Oromiyaa bilisoomsannee akka sabaatti mataa ol-qabannee deemuu danda’uu qabna,” dhaamsa dabarsanii jiru.
Sirna kana irratti Qabeen halluu alaabaa Oromoon faayamee dhangaa aadaa Oromoo waliin hojjatamee akka caal baasiif dhiyaatee galiin isaa dhaabaaf galu Aadde Burtukaaniin gumaachamee caal-baasiif dhiyaatee gurguramee jira. Akkasumas Alaabaan Oromoo J/Mahaamud Jamaaliin dhiyaatee caal-baasiin gurguramees dhaabaaf galee ta’ee jira.
Ayyaana Yaadannoo Guyyaa Gootota Oromoo konyaa ABO Australia Dhiyaa, magaalaa Perth keessatti kabajamee oole kana irratti gumaata battalumatti sab-boontonni Oromoon walitti qabanii fi caalbasii dhiyate irraa galiin doolara Australia 1850 dhimma qabsoof arjoomamuu isaa Maddi Oduu ABO gabaaseera.
Previous Previous post: Guyyaan Gootota Oromoo Kutaa New Zealand Konyaa Wellington Keessatti Sirna Miidhagaafi Hoo’aan Kabajame.
Next Next post: Hidhaa fi Saamichi Ummata Oromo Irraa Akka Dhaabbatu Gaafatame!